တရုတ် Bottle သထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Joysun
ပေ Preform ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပုလင်းကိုမှုတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 1. အဆင့်နှစ်ဆင့် PET Beverage / စားနပ်ရိက္ခာပလတ်စတစ်ပုလင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်း: 500 ~ 40000 B / နာရီ optional ကိုပုလင်း Volume ကို: 50ml ~ 5Gallon ။ ပင်မစက်: ပေလမ်းပိုင်းနှင့်ထိုးနှက်တန်ဆာစက်။ Peripheral ပစ္စည်းကိရိယာ: အနိမျ့ဖိအားလေကြောင်းတွန်း / အလတ်စားဖိအားလေကြောင်းတွန်း / Air လေကြောင်းလိုင်းလေမှုတ်စက် / ရေ chiller / Air ကိုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ / ထိုးနှက်မှိုဒီပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကထုတ်လုပ်စသည်တို့ကိုပေပလပ်စတစ်ပုလင်းကျယ်ပြန့်အဖျော်ယမကာအတွက်အထုပ်လယ်ပြင်၌အသုံးပြုသည်, အစားအစာ, ဆေးဝါး နှင့် Mor ...
1. အဆင့်နှစ်ဆင့် PET Beverage / စားနပ်ရိက္ခာပလတ်စတစ် Bottle သထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်း: 500 ~ 40000 B / နာရီ optional ကို
Bottle သ Volume ကို: 50ml ~ 5Gallon ။
Peripheral ပစ္စည်းကိရိယာ: အနိမျ့ဖိအားလေကြောင်းတွန်း / အလတ်စားဖိအားလေကြောင်းတွန်း / Air လေကြောင်းလိုင်းလေမှုတ်စက် / ရေ chiller / Air ကိုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ / ထိုးနှက်မှိုစတာတွေ
ကဒီပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကထုတ်လုပ်ပေပလပ်စတစ်ပုလင်းကျယ်ပြန့်အဖျော်ယမကာအတွက်အထုပ်လယ်ပြင်၌အသုံးပြုသည်, အစားအစာ, ဆေးဝါး နှင့်ပိုပြီးစက်မှုလုပ်ငန်း။
2. စတင် / PC ကို Extrusion နှင့်မှိုထုတ်လုပ်မှု LINE (တဦးတည်းဇာတ်စင်) မှုတ်
စွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်း: 50 ~ 1000 B / နာရီ optional ကို
Bottle သ Volume ကို: 25ml ~ 250L ။
ပင်မစက်: စတင် / PC ကို extrusion & ထိုးနှက်တန်ဆာစက်။
Peripheral ပစ္စည်းကိရိယာ: အနိမျ့ဖိအားလေကြောင်းတွန်း / မှိုအပူချိန် controller ကို (PC ကို) / Air လေကြောင်းလိုင်းလေမှုတ်စက် / ရေ chiller / Air ကိုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ / Hopper လေမှုတ်စက် / ထိုးနှက်မှိုစတာတွေ
ကဒီပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကထုတ်လုပ်စတင် / PC ကိုပလပ်စတစ်ပုလင်းကျယ်ပြန့်အထုပ်များတွင်အသုံးပြုသည် ဓာတုဆပ်ပြာ, အစားအစာ, ရေနံနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လယ်ကွင်း။
3. စတင် / PC ကို Injection နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (တဦးတည်းဇာတ်စင်) မှုမြားမှုတ်
စွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်း: 500 ~ 2000 B / နာရီ optional ကို
Bottle သ Volume ကို: 10ml ~ 500ml
ဒီပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကထုတ်လုပ်စတင် / PC ကိုပလပ်စတစ်ပုလင်းကျယ်ပြန့်အစားအစာ, အစိုင်အခဲဆေးဝါးနှင့်ပိုပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအထုပ်လယ်ပြင်၌အသုံးပြုပါသည်။
ကျနော်တို့ကတရုတ်ပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ပလပ်စတစ်စက်နှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို 15 နှစ်ရှိသည်။ ဤသည်လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံကတစ်ဦးအဖျော်ယမကာ / အစားအစာပလပ်စတစ်ပုလင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း extrusion နှင့်ထိုးနှက်တန်ဆာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထုတ်လုပ်ပုံကိုသွန်သင်ခြင်း, ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်ပိုပြီးပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုပုံသွင်း။ ဤရွေ့ကားလိုင်းများအနိမ့်စျေးဖြစ်ကြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ကြီးသောလူကြိုက်များသြစတြေးလျ, စပိန်, တောင်အာဖရိက, ဘရာဇီး, ဗီယက်နမ်နှင့်ပိုပြီးနိုင်ငံများတွင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးပုလင်းထိုးနှက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး!
လူပျိုအဆင့် Rotary Vane ဖုန်စုပ် Pump သတ်မှတ်မည်
ဝက်အူမြစ်များဖုန်စုပ် Pump သတ်မှတ်မည်
Rotary Piston ဖုန်စုပ် Pump သတ်မှတ်မည်
အလိုအလျောက် Beverage ဖြစက်, လေဟာနယ် Pack စက်, လူမီနီယမ်သတ္တုဖုန်စုပ် Pack စက်, Carbonated Beverage Production Line,